Kushungurudzika-pasina hotera yako kune Airport Airport - kubva ku40.- CHF
Tinokupai basa rinokosha sehotera muenzi wedu muguta rakanaka reBasel. Nebasa rose rebasa panguva yaunogara muBasel, tinovimbisa kuti unogona kuisa pfungwa pazvinhu zvinokosha - kana kuona nzvimbo muBasel's Old Town, kushanyira Kunstmuseum kana musangano wenyu webhizimisi.
Dhipatimendi rekutsinhanisa zvakananga kubva kune rimwe suo repamhepo kana hotera
Kana uchangosvika kuBasel kuchiteshi chekudenga kana kwechiteshi chezvitima, tichatora kufamba kwako kunetseka. Tinokumirirai paunosvika kuguma uye tinokubvisai rwendo rwenyu nekukupai nemutoro wenyu kusvika kwatiri Sedan kubatsira. Kubva ipapo tinokuendesa kuenda kuhotera yako kana nzvimbo yezviitiko. Mutyairi wako achafara kubatsira nemutsipa wako kusvika pahotera yekukoka.
Kushungurudzika-kusina kubva hotera yako kuenda kuAlex Airport Basel
Kungoti iwe unoda kugumisa kugara kwako muBasel uye kutya kuenda kunhandare, iwe uri Transfer Service BaselIwe zvakare muhutano huripo uye nezvinhu zvose zvinowanikwa. Zvakakwana kwatiri kuti tikuzivise nezvekukumbira kwako kutora paawa imwe yekupedzisira usati waenda kuhotera. Uye kuitira kuti iwe usafanirwa kunetseka nezvekuwana zvakakwana mapepa emari mune mari inogona kunge iri yekunze kune iwe, tinofara kukupa iwe kadhi rechikwereti.
Iwe unogona nyore nyore kugadzirisa kwako paIndaneti. Tinotarisira kugadzira rwendo rwenyu rwunofadza uye rwakachengeteka.
Dare rako rekutumira kubva kuBasel
Akaiswa mu: muBasel nhandare yendege Shuttle Limousine basa
taxi.flughafen March 9, 2017 March 16, 2017 muBasel, nhandare yendege Shuttle, Limousine basa Hapana mhinduro
← Airport Shuttle yeZurich neBasel
BASA RINO 2018 - Yakanaka kufamba neTransfer Service Basel →